musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » New Kia Niro Inoita Nyika Yekutanga
Kia Corporation yakaratidza Niro-nyowani nhasi kekutanga ku2021 Seoul Mobility Show, iyo ine chinangwa chekuita kuti kufamba kwakasimba kuwanikwe nemunhu wese.
Iyo Niro-nyowani inomiririra kuzvipira kwaKia mukuvaka ramangwana rakagadzikana. Sechikamu chakakosha cheKia yekukura eco-hushamwari mutsara kumusoro, iyo modhi nyowani ichakwezva kune zvakaomarara zvinodikanwa zvekuchengetedza-vanoziva vatengi.
Yakagadziridzwa zvachose kubva pasi kumusoro, iyo-nyowani Niro yakagadziridzwa pasi pekambani Opposites United dhizaini dhizaini, ichizadzisa 'Joy for Reason' ethos. Zvinotora kufemerwa kubva kune zvakasikwa kwete mukugadzira chete asiwo mukusarudza kweruvara, zvinhu uye kupedzisa kurova chiyero chakakwana pakati pemaitiro ane chekuita nemhoteredzo uye maonero ane ramangwana.
Iko kusimba kwakasimba kweiyo 2019 Habaniro pfungwa inoonekwa muNiro yekunze dhizaini ine inoyevedza uye yakashinga crossover inotaridzika uye yakakwirira-tech miviri miviri toni. Mbiru yakafara kumashure inonatsiridza kuyerera kwemhepo kuti ivandudze aerodynamics uye inosanganisirwa mumaboomerang-akaita sere kumashure mwenje.
Kia siginecha 'tiger face' yakashandurwa kune iyo-nyowani Niro uye ikozvino inotambanukira kubva kuhodhi, ichienda kusvika kune yakaomeswa fender pazasi. Iyo yemazuva ano dhizaini yepamberi inopedzwa nekurova 'moyo kurova' LED DRL (masikati anomhanya mwenje) ayo anogadzira kuvimba uye kutaridzika kunoshamisa munzira.